UKUJONGA EKUGQIBELENI KWESIMANDLA SENDAWO YOKUFUNDA
Zonke-in-one capacitive touch Kiosk uthotho
Kumgangatho wokuphela kwe-IR kumgangatho wokuchukumisa kumgangatho
Umgangatho wentengiso womgangatho wokuma komgangatho opheleleyo
Uluhlu lwe poster yedijithali ethe nkqo
Isibhengezo sentengiso esibekwe eludongeni
Udonga oluxhonywe kuyo yonke into-in-intsholongwane enye yokuchukumisa
Uluhlu lochukumiso lophahla lwe-IR oludweliswe eludongeni
Inqaku lomhleli: Le yinxalenye yechungechunge lokuhlalutya imeko yangoku kunye nekamva kwintengiso yedijithali. Inxalenye elandelayo iya kuhlalutya iinkqubo zekhompyuter.
Iimpawu zedijithali zanda ngokukhawuleza ukufikelela kwazo phantse kuyo yonke imakethi kunye nendawo, ngakumbi ngaphakathi. Ngoku, abathengisi abakhulu nabancinci basebenzisa imiqondiso yedijithali ngamanani amakhulu ukuthengisa, ukuphucula uphawu lokuphucula amava abathengi, ngokweNgxelo yeDigital Signage future Trends. Kwafumanisa ukuba isibini kwisithathu sabathengisi abathe baphononongwa bathi ukuphuculwa korhwebo lolona ncedo luphambili lweempawu zedijithali, kulandele ukuphuculwa kwenkonzo yabathengi ngeepesenti ezingama-40.
U-Nordiska Kompaniet, umthengisi eStockholm, eSweden, umzekelo, wathumela imiqondiso yedijithali ngemisonto emile etyheliweyo phezulu kwaye waxhoma ezo eludongeni ukuze zenze umbono ongenguwo wokuba libhendwe. Oku kuncede imiboniso ukuba idityaniswe kunye nomthengisi's sober kunye nomgangatho ophezulu wophawu lomgangatho.
Kwinqanaba ngokubanzi, indawo yangaphakathi ye-digital signage ibona ukuboniswa okungcono ukuphucula uphawu, kunye nezixhobo ezingcono zokuzibandakanya ukuphucula amava abathengi.
Omnye umkhwa ophambili kukusuka kude kwimiboniso ye-LCD ukuya kwizibonisi eziqhubela phambili ze-LED, ngokutsho kukaBarry Pearmen, umphathi ngaphakathi wentengiso, i-Watchfire. U-Pearman wathi ukuhla kweendleko zokuboniswa kwe-LED kunceda ukuqhuba le meko.
Ii-LEDs azisiyonto nje iqhelekileyo, zikwaya phambili ngakumbi.
"I-LED ibikhona kangangexesha elininzi, sihlala sizityhalela phambili kwaye sibomeleleyo, sisondela kwi-LEDS kwaye sisondelelene kakhulu," utshilo uBrian Huber, umphathi weqela lokuyila, iTrafirefire kudliwanondlebe. "Iintsuku zophawu lwesibane esikhulu esibonisa abantu abasi-8 ngexesha."
Omnye umkhwa omkhulu kukutsala ngokuthe ngqo kwimiboniso yokubonisa ye-LED ukwenza amava angcikivayo kwaye othusayo, ngokukaKevin Christopherson, umlawuli wentengiso yemveliso, i-NEC Display Solutions.
"Ukujonga ngokuthe ngqo iipaneli ze-LED zenziwe ngendlela enomdla kwaye zinokwenza amava ajikeleze abaphulisi okanye azenze izinto ezijolise ekubumbeni," uChristopherson ekungeneni kwakhe kwiNgxelo yeNgxelo yokuHlanganisa ye-Digital Signage yeXesha elizayo ngo-2018 "ngeendlela ze-pixel zokukhetha nantoni na ukusuka ekujongeni ngokusondeleyo kuye. Ukujonga kude kweendawo ezinkulu, abanini banokusebenzisa i-dvLED ukubonelela ngamava akhethekileyo kwaye angalibaleki. "
Izixhobo ezingcono zokuzibandakanya
Ukumane ube nomboniso oqaqambileyo awonelanga ukuhambisa amava angaphakathi endlini. Yiyo loo nto abathengisi be-digital signage bebonelela ngakumbi nangakumbi kwiinkqubo zohlalutyo zokufumana ulwazi oluphambili kubathengi, ukuze bababandakanyeke ngcono.
U-Matthias Woggon, u-CEO, uneso elibonakalayo, wakhankanya ukungena kwakhe kwi-Digital Signage future Trends Xela ukuba abathengisi basebenzisa izixhobo zokusondelana kunye neekhamera zokuqaphela ubuso ukufumanisa ulwazi oluphambili malunga nomthengi, ezinje nokuba ujonga imveliso okanye umboniso.
"Ii-algorithms zanamhlanje ziyakwazi ukubona imida efana nobudala, isondo kunye nemvakalelo ngokuhlalutya imbonakalo yobuso kwibala lekhamera. Ukongeza, iitouchscreens zinokulinganisa ukujongana nomxholo othile kwaye zinokuvavanya ukusebenza ngokuchanekileyo kwemikhankaso yentengiso kunye nokubuya kutyalo-mali, utshilo uWoggan. "Umdibaniso wokuqatshelwa kobuso kunye netekhnoloji yokuchukumisa ivumela ukulinganisa ukuba bangaphi abantu abasabela kulo mxholo kwaye baququzelele ukudalwa kwemikhankaso ejolisiweyo kunye nokwenza uzinzo oluzinzileyo."
Iimpawu zedijithali zikwabonelela ngamava omnichannel asebenzayo ukuze azibandakanye nabathengi. U-Ian Crosby, usekela mongameli wentengiso kunye nentengiso ye Zytronic, wabhala ekungeneni kwakhe kwiNgxelo ye-Digital Signage future Trends Ingxelo malunga ne-Ebekek, ongumama kunye nomthengisi wemveliso yomntwana eTurkey. I-Ebekek isebenzisa imiqondiso edibeneyo yedijithali ukudibanisa i-ecommerce kunye nentengiso encedisiweyo. Abathengi banokukhangela kulo lonke uluhlu lweemveliso kwaye bathenge ngokuzimeleyo okanye bacele uncedo lokuthengisa ngoncedo.
Uvavanyo lwengxelo ye-Digital Signage future Trends ye-2018 iqinisekisile le meko yokunyusa amava asebenzayo. Iipesenti ezingama-50 zabathengisi abathi bafumana iindawo zokuchukumisa ziluncedo kakhulu kwiimpawu zedijithali.
Eyona ndlela inkulu ngayo yonke le mizekelo, kukuqhubela phambili kwimithombo yeendaba, ngokwe-2019 yeDigital Signage future Trends Report blog nguGeoffrey Platt, umlawuli weRealMotion
Ezi teknoloji zisebenzayo ezivelayo zifuna into enye enye. Ukukwazi ukwenza, ukuhlalutya kunye nokuphendula kwihlabathi elifuna izisombululo zexesha elifanelekileyo, ”utshilo uPlat.
Kwindawo yangaphakathi, imiqondiso yedijithali ikhula zombini ngokubaluleka kokukhulu, ukubonakalisa okukhulu ngesoftware enobuchule kwaye kuncinci, njengoko iivenkile zikaMama kunye nePop zibonisa ukubonakala okulula kumanani amakhulu.
UChristopherson uphikisa ukuba abasebenzisi bedijithali yokuphela kwemiqondiso kunye nabathengisi bebesenza izisombululo ezenza abaphulaphuli ababandakanyekayo. Isinyathelo esikhulu esilandelayo xa zonke iziqwenga ziwela endaweni, kwaye siqala ukubona ukuhanjiswa okunamandla okunamandla okuthengisa kunye neenkampani zombini ezinkulu nezincinci.
"Inqanaba elilandelayo kukubeka indawo yohlalutyo," utshilo uChristopherson. Xa sele igumbi lokuqala lale nkqubo epheleleyo egqityiweyo, ungalindela ukuba le nto ivele njengomlilo wasendle njengokuba abanini bebona ixabiso elongezelelekileyo elinalo. ”
Ixesha lokuposa: Meyi-13-2020
indawo yethu yonyawo, iinkokeli, ubuchule, iimveliso
NGU-ANASTASIA STEFANUK JUNI 3, 2019 AUGMEN ...
NGABE BADLULA ISIQINISEKISO SESISEKO ...
UKUJONGA EKUGQIBELENI KWENKUNDLA YENDALO ...
UNGASIKHETHA NJANI ISIQULATHO SEBENZA?
Idilesi: Ulwakhiwo C, iGaoke International Innovation Industry Park, kwiSithili saseGuangming, eShenzhen, China